sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa...
Waa tuug duulaan ku ah hantida danyarta ah. Waa sixroole silloon ka dhibay ciddii u tagta. Waa beenaale diinta ku shaqeysta. Waa xishmad laawe haweenka duufsaday oo anshax xumo u gaysta. Bilaa licence ayuu ku shaqeystaa. Aqoontiisa lama yaqaan. Muwaadin maaha.
Waxa dhowaan Hargaysa ka hilaacay nin Awliya Alla sheegtay oo dad badan duufsaday. Wuxu ninkaasi ku andacoonayaa in uu tuf leeyahay oo uu daweeyo sixirka.
Waxa dhacday in dadka la kala hore si loo warko dabiibkaa bugta ah. Safaf dhaadheer ayaa loo galaa, muddona way qaadataa sidii loo gaadhi lahaa tuugaa.
Waa farsamo casriyeysan oo loogu soo tafaxaytay in la boobo hantida ummadda. Hanti-boob oo kaliya ma ahee tanu waxa ay hoos u dhigaysaa iimaankii dadku aaminsanaayeen diintooda. Dadkan waxa laga dhaadhicinayaa in Eebaheen baryadiisa cid loo daba fadhiisto oo waasto loo raadsado. Ninkan waxa la xaqiijinayaa in aanu cilmiga diinta sidaa ugu xeel dheereyn. Habka wax uu ku daweynayaana waa khuraafaad iyo arrimo diinta ka fog.
Hadaba la yaab ma laha oo tuug iyo tuuganimadu ugub ma aha oo waligeed baa la arki jiray, laakiin waxa la yaab leh sida JSL looga ogolaaday tuugani in uu dadka dhaco, oo uu jahawareeriyo. Waliba ogolaashaha waxa u dheer in hawshiisaa loo fududeeyo oo dadka loo soo jillaabo oo dacaayad been ah loo sameeyo. Waxa nagu maqal ah in xataa askartii dawladdu ay amnigiisa sugayso, oo aan loo soo dhowaan karrin.
Waxa iyaduna taas ka sii darran dawladdii oo ay ugu horeeyaan wasaaradiii ay khuseyneysay oo arrinta tuuggan aan waxba ka odhan. Ninkan cidi may siin ogolaansho ( licence ) uu ku shaqaysto. Cidi may waydiin aqoontiisa iyo shahaadadihiisa. Ciddi may waydiin in uu muwaadin yahay iyo in uu ajaanib yahay. Ciidamada amaanka ee kolka ay doonayaan saqda dhexe guryaha ugu daata cidda la tuhmo waxa ay ku guuldareysteen inay tuugan hadhka cad wax xadaya ay soo qabtaan oo sharciga hor keenaan.
Waxa iyaduna mid lala yaabo ah culumadii Reer Somaliland oo iyaguna, tiro kooban mooyaane, afkooda ka xidhay in ay xaqqa ku adimaan oo dadka wax u sheegaan. Dhowaan bay aheyd kolii ay culimada Reer Somaliland oo dhami sida fiinta uga qaylyeen baanks la yidhi waa la furayaa oo ay ku sheegeen in ay ribo ku shaqeeyaan. Tolow maxaa arrintan badankoodu uga aamuseen oo ay sidaas oo kale uga qaylin waayeen? Waxan qabaa in dambiga ninkan mid walba ka wayn yahay. Dambiga tuugani waa sheegashada awood la inoo sheegay in Eebaheen uun gaar u tahay.
Gebogabadii waxan dadka Reer Somaliland u sheegayaa in inta goori goor tahay tuugaa la iska qabto oo xabsiga loo taxaabo, haddii kale meel dheer baa laga dooni doonaa.
Waxa kale oo aan bogaadinayaa Sheekh Adan Siiro iyo Sheikh Berberaawi oo ka mida shuyuukhda tirada yar ee tuugaas iyo afcaashiisa dadka u sheegay .
Sxb-da Safka-hore JSL.
Posted on Thursday, June 01 @ 15:02:09 UTC by editor
Print sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa...
sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa... - sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa...
Name : IFIYE
Subject : Re : sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa...
Waa yaabe sixirka iyo jinku ma cudur haweenka u gaar ahbaa?
Tuugan sheekha sheeganaya muxuu dumar uun usoo urursaday?
Sacabka hadaan xeeladi ku jirrin maxaa habeenkii uun loo yumaa?
Ninkan hadii aanu beenaale aheyn muxuu dumarkuun ugu yeedhay?
Dadka reer Somaliland gaar ahaan reer Hargaysa waa ku ceeb in dumarkoodii sidan laga yeelo oo inta meel lagu ooto waa la daweynayaa la yidhaa.
Pages : [ sixiroole maan iyo miyir tiray reer hargaysa... 1 ]